Drum ụdị ash oyi - China Kechengyi Environmental Protection na Electric Power Technology
Drum Type Ash oyi
The drum ụdị ash oyi bụ a drum ụdị okpomọkụ Exchanger mee ka obi jụrụ ndị nnukwu ihe onwunwe, na ihe owuwu na okpomọkụ inyerịta usoro nke ndị dị iche iche na nke ndị na mbụ okpomọkụ Exchanger. N'ihi na drum ụdị ash oyi, atọ ụzọ nke okpomọkụ nyefe dị ka kwes radieshon, conduction, na convection na-arụ ọrụ na n'otu oge ahụ, na isi jụrụ ajụ bụ mmiri na abụọ bụ ikuku. Ọ bụ a elu arụmọrụ ash obi jụrụ ngwá, nke e mere ka ihe a chọrọ n'aka nke nnukwu-olu CFB ji esi mmiri ọkụ. The drum ash oyi mejupụtara drum, ash ndochi ngwaọrụ, ash orùrù ngwaọrụ, mbanye ngwaọrụ, nnyefe ngwaọrụ, jụrụ mmiri usoro na electric akara ngwaọrụ, nke na-kpọmkwem na-eji maka na-ekpo ọkụ ash jụrụ nke CFB ji esi mmiri ọkụ
The drum ash oyi mejupụtara drum, n'usoro usoro, mbanye usoro, ash ada ngwaọrụ, ash orùrù ngwaọrụ, jụrụ mmiri usoro na electric akara ngwaọrụ. The isi Ọdịdị na ọrụ ndị dị ka ndị:
Drum: ọ na-emi esịnede site n'ime drum na elu drum, na-etolite ihe nchọ mmiri oghere ọnụ na rotary nkwonkwo na mmiri nloghachi ọjà. The n'ime mgbidi nke dị n'ime drum ka welded na gburugburu-ndokwa ịghasa pupụtara na longitudinal pupụtara, nke nwere ike nyefee okpomọkụ nke slag na-ekesa jụrụ mmiri site thermal conduction, convection na ụzarị ọkụ.
The drum bụ isi na-arụ ọrụ nke drum ash oyi, na ash oyi nwere ike kere n'ime GTL usoro otu drum ash oyi na GTLS usoro multi-tube echetakwa drum ash oyi dị ka Ọdịdị nke ahụ drum.
N'usoro usoro: ọ na-emi esịnede akwado mgbanaka, na-akwado wheel, na catch wheel. The na-akwado mgbanaka arụnyere na mpụga nke drum, nke a na-chụpụrụ site na ịnya ụgbọ ala usoro inupụ na drum n'usoro na anọ na-akwado wiil. The elu nke drum nwere ike ịtọ site n'ịgbanwe akwado wheel. The catch wheel nwere ike amachi axial Ndahie nke drum.
Ash na-ada ngwaọrụ: ya mee nke manhole, mmụba na nkwonkwo, ash ada ọjà, ash tank, ash akara ngwaọrụ. The ji esi mmiri ọkụ na ala ash ga-adaba drum nke ash oyi site na ash ndochi ọjà. The ash tank nwere a na-adịghị mma-mgbali oru n'ọdụ ụgbọ mmiri. The ash akara ngwaọrụ nwere ike igbochi ash si na-eri eri site na mgbochi atụ ogho edinam.
Ash-agbapụta n'ahụ ngwaọrụ: ọ na-emi esịnede ash tinyekwa oru cover na ash tinyekwa, na arụnyere na-ezighị ezi-mgbali ikuku mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri na ash orùrù n'ọdụ ụgbọ mmiri. The akara cover mee nke abụọ mbughari akụkụ (elu ma na ala akụkụ), nke bụ adaba n'ihi na mmezi.
Jụrụ mmiri usoro: ya mee nke n'usoro nkwonkwo, mmiri anwụrụ ka igba, laghachi, mmiri anwụrụ, metal sooks. Nke a na usoro nwere ike mee ka ndị ahụ na-okpomọkụ etinye obi gị dum na ash. The n'usoro nkwonkwo-ekesa uzo mmiri na mmiri na-alaghachi mmiri evenly na tinyekwa njedebe, nke bụ adaba n'ihi na mmezi na mma dị ka nke ọma. The n'usoro nkwonkwo na-onwem na nchekwa ngwa dị ka mgbali mita, RTD, nchekwa valvụ. Ndị ngwa nwere ike arụnyere na obi jụrụ mmiri pipeline dị na chọrọ nke ọrụ.
Electric akara ngwaọrụ: ya tumadi na-ezo aka electric akara kabinet na yiri akara ngwá, nke nwere ike na-enye ike ma na-achịkwa n'ókè-Ash oyi. Ọ nwere ike na-eziga remote mgbaàmà nweta ime akara.
3. Main ụzụ oke
Ihe nlereanya nke ash oyi bụ GTL (S) D - n × L (ekpe ma ọ bụ aka nri), otu nke, D anọchi drum dayameta (mm), gụnyere 700mm, 800mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm, na 2000 mm; n anọchi ike (t / h); L anọchi anya n'etiti uzo mmiri ma tinyekwa (mm). Dị ka dị iche iche echichi ọnọdụ, na uyi oyi nwere ike nkewa dị ka ekpe ụdị na nri ụdị, chere ihu ash oyi tinyekwa, ọ na-ekpe ụdị ma ọ bụrụ na ụgbọala na ekpe na ziri ezi ụdị ma ọ bụrụ na ụgbọala na nri. Na ogologo nke ash oyi bụ ofu, nke a na-emekarị metụtara na ikike, ash okpomọkụ, na gosiri anya n'etiti uzo mmiri ma tinyekwa. Mmepụta nke ash oyi bụ 0 - 80t / h. Na obi jụrụ okpomọkụ bụ 80 - 150 ℃
4. Nwụnye Ntụziaka
Ebe ahụ ash oyi na ewepụghị n'ala na-agba ike elu karịa 6000Pa, (arịlịka bolt dịghị mkpa), mgbe ahụ-edebe agbakwunyere igwe n'elu ala maka na nkuku anọ nke ash oyi guzoro, na Weld na n'ịchọpụta ígwè na agbakwunyere igwe na gbochie na-akpụ akpụ mgbe ash oyi atọrọ na nri ebe
Mgbe ntọala dị elu karịa n'ala, wụsa abụọ longitudinal ma ọ bụ anọ transverse larịị ihe warara ntọala ike karịa C30 n'ala. Mgbe ekpe ụdị na nri ụdị ash oyi na-ndokwa na-esote onye ọ bụla ọzọ, n'ihi na adaba mmezi na idozi, mbanye moto ga-ndokwa na elu n'akụkụ, nke pụtara na-etinye n'aka ekpe ụdị ash oyi na n'aka ekpe, na nri pịnye n'akụkụ aka nri.
GTL usoro otu drum ash oyi
1) Nnukwu mmepụta, nke nwere ike iru 80t / h na kacha
2) Large esịtidem ohere, nke bụ adaba n'ihi na nnyocha na mfe n'ihi na mmezi na a ala na-eri.
Next: Pneumatic slag orùrù valvụ
Manual elu okpomọkụ ámá valvụ
Mbanye yinye gia
Slag nri ngwaọrụ
High okpomọkụ eguzogide corrugated compensator